Oooy! Faallooyinku way soo noqdeen. | Martech Zone
Isniintii, September 24, 2007 Isniintii, September 24, 2007 Douglas Karr
Thanks to Julie aniga oo arinta kor u qaadaya!
Sep 25, 2007 at 7: 50 AM
Waan ku faraxsanahay inaan arko aniga kaliya ma ihi ee ka waalaya faallooyinka spam - Waxaan u maleynayaa inaan si dirqi ah uga badbaaday mowjadihii ugu dambeeyay ee ku dhacay…
Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan arko adiga oo wax ka qabanaya arrintan, si fudud maxaa yeelay waxaad awoodi kartaa inaad fahamto waxa ku dhacaya dhamaadka dhabarka. Maxay waxyaalahan oo dhan waxyaabaha kale ee anti-spam dhab ahaan sameeyaan? Waxaan hayaa mid ka mid ah kuwa carrab la'aanta ah "ku dar labadan lambar" taas oo aragti ahaan u shaqeyn laheyd si cajiib ah, si kastaba ha noqotee, tan oo spam ah ayaa wali ka dhigaya - sidee buu u dhacaa taas ?! Aragti ahaan, haddii lagaa doonayo inaad ku darto laba lambar si sax ah si loo xaqiijiyo inaad dad tahay, faallooyinkaas waa inay muujinayaan, mana jiraan wax dhexdhexaad ah, sax?
Mid ka mid ah qaybaha ugu fiican ee aan rakibay wuxuu ahaa kumbuyuutarka IP Ban. Waan dhex qodan karaa dhinaca SQL ee waxyaalaha, soo jiidan karaa spam-yada IP-yada ah, ka dibna gacanta ayaan ku dari karaa si loo mamnuuco. Waxay u shaqeysaa si weyn (way fiicnaan laheyd haddii ay heli laheyd IP-keeda oo ay ku darto), waxayna u muuqataa inay xannibayso qaddar qarsoodi ah oo isku day ah in la bixiyo wax badan.
Waxaan rajeynayaa inaan arko waxa aad la timaado!
Sep 25, 2007 at 2: 13 PM
Haa! Waan ka faaloon karaa Waan ka xishoonayaa inaan haysto tan oo dhejisyo ah oo loogu talagalay bloggeyga oo aad had iyo jeer ku xirto …… mana aanan dhejin. Ogow is-qor: ka shaqee caawa!
Ma sugi karo inaan kugu arko Websaydhka usbuuca soo socda!